अब विदेशबाट कति सुन ल्याउन पाइने ? | mulkhabar.com
अब विदेशबाट कति सुन ल्याउन पाइने ?
May 31, 2019 | 5:57 am 65 Hits
सरकारले विदेशबाट फर्किएका नेपालीले ल्याउने काँचो सुन तथा सुनको गहनाको सीमा बढाएको छ।
अब भन्सार तिरेर २५ तोलासम्म सुनका गहना र एक सय ग्रामको काँचो सुन ल्याउन पाइने भएको हो। आर्थिक विधेयक २०७६ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
सुनको गहना पचास ग्रामसम्म, चाँदीको गहना पाँचसय ग्रामसम्म र एक लाख रुपैयाँ मूल्यसम्मको जवाहरात जडित साथमा ल्याएको गहना गुरियामा भन्सार छुट थियो। तोकिएभन्दा बढी ल्याएमा ऐनअनुसार कारबाही तथा जरिवाना हुने जनाइएको छ। -अन्नपूर्णबाट
सुन तस्करी : ७ सय ५२ पेज लामो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसँग, को को परे लिष्टमा ?
रोकीयो ३३ किलो सुन तस्करीमाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया ? यस्तो छ कारण
सुन तस्करीका अभियुक्त एसएसपी खत्रीले पनि गरे आत्मसमर्पण, बच्ने दाउ की कारवाहीको डर ?
सुन तस्कर ‘गाेरे’लाइ सरकारी वकील र प्रहरीकै संरक्षण !